सांगीतिक कथाले राजनीतिक ‘पिर’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सांगीतिक कथाले राजनीतिक ‘पिर’
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएका वास्तविक पात्रहरुको जीवनकथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको गायक प्रकाश सपुतको प्रतिक्रिया
फाल्गुन ३०, २०७८ जनकराज सापकोटा, दीपक सापकोटा
काठमाडौँ — गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले सशस्त्र द्वन्द्व, फेरिएको व्यवस्था र नफेरिएको अवस्थाबारे व्यापक बहस सिर्जना गराएको छ । गीतले ‘जनयुद्ध’ का लडाकुको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता–कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन् । चार भ्रातृ संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर युट्युबबाटै भिडियो हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्न सर्जकसँग माग गरेका छन् । उता सर्जक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवन कथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गीतको पक्षविपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस चलिरहेका बेला कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै गायक सपुतले हरेक दिन टेलिभिजनका पर्दा र पत्रपत्रिकाका पानामा देखिएका दृश्यलाई गीत/संगीतमा बुन्नु कसरी अस्वाभाविक भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘पिरले युद्धकै जग/बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेको हो । समानताका लागि सँगै लडेका कमरेडहरूबीच बढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन मात्रै खोजेको हो । यत्तिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र ? पत्रपत्रिकाहरूमा समीक्षा लेखिँदै/पढिँदै आएको होइन र ?’ उनको प्रश्न छ ।
भिडियोमा देखिएका पात्र काल्पनिक नभएको र पूर्वछापामारलाई आफूले प्रत्यक्ष देखेको र संगत गरेको उनको भनाइ छ । ‘मैले करिब ४ वर्ष दोहोरी साँझमा काम गर्दा गाउने, बजाउने, पकाउने र पस्कनेमध्येका थुप्रै सहकर्मीहरू पूर्वलडाकु थिए । उनीहरू चरम निराशावादी कुरा गर्थे,’ सपुतले भने, ‘त्यो समयमा नै मैले यी विषय डायरीमा नोट गरेको थिएँ । संयोगले अहिले निस्क्यो ।’ ‘सच्चा पात्र’ को अवस्था, स्वभाव, सोचको अध्ययन गरेर गीत रचिएको उनको दाबी छ ।
गीतको मुख्य पात्रका रूपमा गायक सपुत र सुरक्षा पन्त छन् । कलाकार पन्तको अभिनयलाई पनि धेरैले मुक्तकण्ठले सराहना गरेका छन् । त्यस्तै अर्की चर्चामा रहेकी कलाकार हुन् केशु पुन मगर (केशरी) जसले एक पूर्वछापामारको भूमिका खेलेकी छन्, उनी गुजाराका लागि देहव्यापारमा लागेको पात्रका रूपमा भिडियोमा देखिन्छिन् । यो दृश्यलाई माओवादी नेता–कार्यकर्ताले ‘जनयुद्ध’ मा लागेका समग्र महिलाको अपमानका रूपमा अर्थ्याएका छन् । भिडियोमा महिला छापामार हुँदै देहव्यापारमा संलग्न पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी केशरी वास्तविक जीवनमा जनवादी कलाकार हुन् । बागलुङ बरेङ गाउँपालिका निवासी केशरी कक्षा ३ पढ्दा नै जनवादी कलाकार बनेर हिँडिन् । उनले आफू ‘जनयुद्ध’ को समयमा गृहजिल्ला बागलुङदेखि गुल्मीसम्म गीत गाउँदै, जागरण भर्दै हिँडेको अनुभव सुनाइन् । म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि आएका प्रतिक्रियालाई उनले स्वाभाविक रूपमा लिएकी छन् । ‘कसैले राम्रो भनेका छन्, कसैले नराम्रो पनि । तर, खासमा यो भिडियो नेपाली समाजको यथार्थ हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
कलाकार केशरीले यो पात्रका रूपमा प्रकाशले आफूलाई योग्य ठानेकोमै खुसी व्यक्त गरिन् । छापामारका अनेक संघर्ष देखेकी उनी गीत र भिडियोले सत्य घटनालाई टपक्क टिपेको मान्छिन् । ‘गीतमा भनिएजस्तो कथाव्यथाहरू हामीले देखेका छौं, सुनेका छौं,’ उनले भनिन् । केशरी चिया पसल चलाएर जीवन गुजारा गर्दैछिन् । काठमाडौंको नेपालटारछेउ शेषमती पुलनजिकै उनको पसल छ, उनी कलाकारितामा पनि संघर्षरत छिन् ।
सपुतले भने पूर्वछापामार देहव्यापारमा लागेको दृश्यमा आत्मालोचना गरेका छन् । ‘अलि बढी कोट्याइएको एउटा दृश्य छ, त्यो आत्मसम्मानसँग जोडिएको हो । प्रतीकात्मक रूपमा राखिएको दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा असर पुग्न जाने महसुस गरें । यसमा भने आत्मालोचना गर्छु,’ उनले भने ।
‘सबैखाले प्रतिक्रिया हेर्दै छु । आफ्नै सिर्जनालाई तपाईंहरूको नजरबाट पनि हेर्दै छु । मैले गलत गरेको हो कि ? तपाईंहरुले त बुझेको हो, समीक्षा गर्दै छु,’ उनले भने  ।
माओवादीका धेरै नेता–कार्यकर्ताले चुनावको मुखमा ल्याइएको यो गीत राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्या पहाडीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘चुनावको मुखैमा आएर प्रकाश सपुतले जनयुद्धको उपलब्धिलाई दिग्भ्रमित पार्दै वीरता, साहस र बलिदानीपूर्ण ढंगले परिवर्तनको आन्दोलनमा समर्पित वीर वीरंगनाको इतिहासलाई अपमान गर्दै गीतिकथा सार्वजनिक गरेर परिवर्तनविरोधी प्रवृत्तिको मतियार बनेका छन् ।’
सपुतले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह, नियत र उद्देश्य नराखेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘सबैमा सबै खाले क्षमता हुँदैन । मभित्र राजनीतिक चेत छ तर त्यति धेरै राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दिनँ । जसरी अघिल्ला बोल माया, दोहोरी ब्याटल, गलबन्दी, बदला बरिलै, फुटेका चुरा, मेरो पनि हैन र यो देश, कुरा बुझ्न पर्छ गीतहरूमा कथा बुन्थें, पात्र बनाउँथें, टुक्का टिप्थें, लय हाल्थें र रेकर्ड/छायांकन गर्थें । यसमा पनि त्यही प्रक्रिया छ ।’ तर सपुतको भिडियो आपत्तिजनक भन्दै माओवादी पंक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लगातार आक्रोश पोखेको छ ।
माओवादीको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का संयोजक सुमन देवकोटाले ट्वीटरमार्फत प्रकाश सुपतको गीत युट्युबबाट हटाउन माग गरेका छन् । लेखेका छन्, ‘देशको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि लडेका महिला छापामारलाई चरित्रहीन नारीका रूपमा चित्रण गरिएको कथित म्युजिक भिडियो सह्य छैन । गणतन्त्रको सेनानीको अपमान हुने शब्द/दृश्य तुरुन्त हटाउन म प्रकाश सपुतसँग अनुरोध गर्दछु ।’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले पनि फेसबुक पोस्टमा भिडियो आपत्तिजनक मात्रै नभएर दण्डनीय भएको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले त गायक सपुतलाई चेतावनी दिएकी छन् । उनले फेसबुकमा स्टाटसको अन्तमा लेखेकी छन्, ‘पिर नामक भिडियो सार्वजनिकमा माफी मागेर तत्काल युट्युबबाट नहटाइए तपाईंको यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कत सहेर नबस्ने चेतावनी दिन चाहन्छु ।’
सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि हतोत्साही नै गराउन खोजिन्छ भनेर आफूले नठानेको सपुतको भनाइ छ । ‘यस्ता विषय उठान गर्दा आउने राजनीतिक दबाबहरूको केही अनुमान गरे पनि गीत हटाउनेसम्मकै माग उठ्छ भनेर आकलन गरेनछु । यसलाई गलत व्याख्या गरिन्छ र निरुत्साहित गर्न खोजिनेछ भन्ने कुराको हेक्का राखेनछु,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रसम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले म्युजिक भिडियोमाथि आक्रोश र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए पनि जनयुद्धकै एक नेतृत्वकर्ता एवं जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने गीतले अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएको भन्दै आपत्ति मान्नुपर्ने विषय नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘म पनि जनयुद्धको एक अगुवा हुनुका नाताले प्रकाश सपुतको गीतमा टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्छु र भन्छु, त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन । गीतले जनयुद्धको विरोध गरेको छैन,’ भट्टराईले भनेका छन् ।
माओवादीका पूर्वलडाकु तेज दोङले बिम्बहरू जीवन्त उतार्न सफल भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पिर हेरेपछि विद्रोहमा सामेल सिपाहीको नाताले जे देखें/भोगें पिर जीवन्त रूपमा उतार्नु भएकामा साधुवाद ।’
त्यस्तै, गीतको प्रशंसा गर्दै सर्जकको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनेको संख्या असाधारण छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र प्रशंसाको चर्को बहसबीच भिडियो युट्युबका ‘ट्रेन्डिङ’ मा छ । शुक्रबार साँझ गायक सपुतकै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक यो म्युजिक भिडियोले लगातार दर्शक तानिरहेको छ । आइतबार बिहान १० बजेसम्म भिडियोको ‘भ्युज’ १२ लाख हाराहारी थियो, प्रत्येक घण्टा एक लाखभन्दा बढीले यो गीत युट्युबमार्फत हेरिरहेका छन् । आइतबार मध्यरातिसम्म ३० लाख पटक यो भिडियो हेरिएको छ ।
कथात्मक शैलीमा प्रस्तुत म्युजिक भिडियोको केन्द्रीय पात्र छन्, सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा जनवादी बिहे गरेका एक दम्पती । लडाइँमा घाइते भएका दम्पती शान्ति प्रक्रियापछिका दिनमा बाँच्नकै निम्ति कठिन संघर्ष गरिरहेको भिडियोमा देखाइएको छ । अनि क्रान्तिको नेतृत्व गरेको दल दिशाहीनतामा हराएको, राज्य नेतृत्वमा पुगेका नेताहरू आफ्नै कार्यकर्ताको दिनहीन हालतमाथि तमासे बनेको जस्ता विषयमाथि म्युजिक भिडियोले कठोर व्यंग्य गरेको छ । भिडियोमा लडाकुको सपना साकार नभएको र देहव्यापारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेकासम्म दृश्य छन् ।
संगीतकार आभाष म्युजिक भिडियोमाथि दलसम्बद्ध व्यक्तिबाट आएका आक्रोश र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति समग्र वाक् स्वतन्त्रताकै विरुद्धका आएको टिप्पणी गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई अनुदार राजनीतिको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो गीतमा त्यस्तो आपत्ति मान्नुपर्ने कुरै केही छैन । युद्ध लड्नेहरू अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने देखाइएको न हो ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले गीत/संगीत सर्जकलाई भयपूर्ण अवस्थामा लैजाने र उनीहरूको कल्पनाशक्तिमाथि प्रहार हुने बताए ।
राजनीतिक विषयमा बनेका गीत र भिडियोमा दलका नेता–कार्यकर्ता उत्तेजित भएको यो पहिलो पटक भने होइन । तीन वर्षअघि लोकगायक पशुपति शर्माले जस्तो धम्कीपूर्ण टिप्पणी र आक्रोशको सामना गरेका थिए, अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छन् प्रकाश सपुत । २०७५ फागुनमा पशुपति शर्माको ‘लुटन सके लुट कान्छा, लुटन सके लुट’ बोलको गीत पनि तत्कालीन सत्तारूढ नेकपासम्बद्ध नेता–कार्यकर्ताको आक्रोशको तारोमा परेको थियो । त्यतिबेला नेकपाको भ्रातृ संगठन युवा संघका नेता किरण पौडेलले त फेसबुकमा स्टाटस नै लेखेर गायक पशुपति शर्मालाई बहिष्कार गर्न अपिल गरेका थिए । नेकपासम्बद्ध नेता तथा भ्रातृ संगठनको आक्रोश चर्किंदै गएपछि शर्माले गीत युट्युबबाटै हटाएका थिए । त्यतिबेला सत्तारूढ दल नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता विरोधमा प्रस्तुत भएका थिए, अहिले पनि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र विरोधमा अघि सरेको छ ।
संगीतकार आभाषले म्युजिक भिडियोमाथि दलका नेता–कार्यकर्ताको उत्तेजनालाई आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने सक्ने समाजविरुद्धकै कदमका रूपमा पनि अर्थ्याए । ‘माओवादी मात्रै होइन अरू दल पनि उस्तै देखिन्छन् । असहिष्णु स्वभाव जुनसुकै पार्टीमा पनि छ । आलोचकमाथि खनिने प्रवृत्ति खतरनाक छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक मात्र होइन, धार्मिक संगठन पनि गीत/संगीतको विरोधमा उत्रने गरेका उदाहरण छन् । २०७७ को साउनमा गायिका सोफिया थापाले ‘अबको तीज नो व्रत प्लिज बोल’ को गीतको म्युजिक भिडियो हाइलाइट्स नेपाल नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । लगत्तै थापालाई हिन्दु जागरण नेपाल र विश्व हिन्दु युवासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति नामक संस्थाका प्रतिनिधि बताउनेहरूले गीत हटाउन दबाब दिएका थिए ।
-कान्तिपुरमा साेमबार प्रकाशित यो समाचारमा केशुको परिचय पूर्वलडाकुकाे रुपमा चित्रित भएकोमा माफीसहित भूलसुधार गरिएको छ । - सम्पादक
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:३४
विधिशास्त्रको विकासका निम्ति फैसलामा फरक मत
फाल्गुन ३०, २०७८ सम्पादकीय
अदालती फैसलाहरूमा न्यायाधीशले फरक राय राख्नुको अर्थ न्याय निरूपणमा अर्घेल्याइँ गर्नु होइन, विधिशास्त्रलाई अझ समृद्ध तुल्याउनु हो । यसबाट सम्बन्धित मुद्दामा न्यायको अर्को पाटो उजागर मात्र हुँदैन, भविष्यमा सोही प्रकृतिका मुद्दामा अधिवक्ता र न्यायमूर्तिका लागि थप तर्काधारहरू पनि उपलब्ध हुन्छन् । र, एउटा मुद्दामा अल्पमतबाट आएको फरक राय विधिशास्त्रीय अभ्यासका क्रममा भोलि अर्को मुद्दामा फैसला निर्क्योल गर्ने बहुमतकै मूलाधार बन्न पनि सक्छ ।
न्यायाधीशको फरक राय कार्यान्वयनमा नजाने भए पनि यस क्रममा प्रतिपादन भएका तर्क–सिद्धान्त पछि गएर कानुन बनेका विश्व–उदाहरणसमेत छन् । नेपालमा भने फरक राय लेख्ने अभ्यास एकदमै विरल बन्दै गएको छ । र, यसबारे आवश्यक चिन्तन–मनन गरिएको पनि पाइँदैन, जुन विधिशास्त्र–विकासका दृष्टिले सुखद संकेत होइन ।
सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला पाँच वर्षका ११ सय फैसलामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै फरक मत पाइएका छन् । यसको अर्थ संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा न्यायाधीशहरूबीच न्यायिक दृष्टि तथा विचारमा विविधता पाइएन भन्ने हो । इजलासका न्यायाधीशहरूको सामूहिक विवेकले सदैव न्याय–अन्याय छुट्याएकै हुन्छ वा सही व्याख्या गरेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरूको मौलिक समझलगायतका विविध पक्षबाट न्याय प्रभावित भएको हुन सक्छ । यस्तामा न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र सोच राख्ने हो भने वैकल्पिक व्याख्याहरूमार्फतै भए पनि न्यायका पाटाहरू छुट्दैनन् । र, यसबाट भविष्यमा सही न्याय निरूपणका लागि मार्गदर्शन मिल्छ । न्यायाधीशहरूले आ–आफ्ना राय लेख्ने अभ्यास बढाउँदा ‘फैसला निर्देशित रूपमा भएको छैन, न्यायाधीशहरूले स्वविवेकमा निर्णय गरेका छन्’ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ, जसले अन्ततः न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न सघाउँछ ।
दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासमा सर्वसम्मति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ । इजलासमा संलग्नमध्ये एक न्यायाधीशले फैसला लेख्छन्, बाँकीले त्यसमा सहमति जनाउँछन्, वा बहुमतको रायसँग सहमत नहुनेले फरक मत लेख्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तो अधिकार तथा स्वतन्त्रता हुन्छ, किनभने न्यायसम्पादनमा न्यायाधीशहरूको हैसियत समान हुन्छ । इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीश पनि अन्य न्यायाधीशसरह समान हुन्छन् । फेरि लोकतान्त्रिक राज्यमा न्यायालय पनि आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था हो, जहाँ वाद–प्रतिवाद तथा बहस–विमर्शले अनिवार्य रूपमा प्रश्रय पाउनुपर्छ । त्यसैले निर्णयमा सहमत भए पनि त्यसका निम्ति लिइएका ‘आधार/कारण’ मा न्यायाधीशहरूले फरक मत राख्न सक्छन् । ‘कन्कर्निङ अपनियन’ भनिने यस्तो मतको प्रयोगबाट कानुनी समाधानका बहु–उपायहरू अगाडि आउँछन्, र वैकल्पिक तर्क–सिद्धान्त विकसित हुन्छन् ।
संविधान र कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन, संसद्मार्फत कानुन निर्माणमा पनि यस्तो फरक मतले प्रकाश दिन सक्छ । अतः संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतका फैसलामा त्यस्ता फरक रायको अपेक्षा गरिन्छ । तैपनि कति कारणले हो, नेपाली न्यायाधीशहरूले कमै मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन्, जसको कारणबारे समुचित अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । या त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू फैसलामा वैकल्पिक राय प्रस्तुत गर्नुलाई अतिरिक्त कार्यबोझका रूपमा लिन्छन्, या वरिष्ठ न्यायाधीशले लेखेको फैसलामा मत बझाउन चाहँदैनन् र ‘फड्के किनाराका साक्षी’ बस्नुलाई सजिलो ठान्छन् । या वरिष्ठ न्यायाधीशले आफूसँग कनिष्ठले राय बझाएको रुचाउँदैनन्, र उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छन् । यसबाहेक, न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनलाई केवल आफ्नो इजलासमा आएका मुद्दा फटाफट फर्स्योट गर्ने कार्यका रूपमा मात्र बुझेका पनि हुन सक्छन् ।
कारण जे भए पनि, फरक मतको अभ्यास नभएबाट हरेक न्यायाधीशको स्वतन्त्र विवेकको अस्तित्व नदेखिएको मात्र होइन, विधिशास्त्रको उच्चतम विकासमा पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । बहुलवादी दर्शनमा आधारित संविधान–कानुन भएको मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायका न्यायाधीशहरूको हरेक मुद्दामा एउटै मत हुने त पक्कै हुँदैन, तर पनि उनीहरूले मत किन बझाएका छैनन् अर्थात् फरक राय लेखिरहेका छैनन् ? यो प्रश्न विचारणीय छ । यसबाट न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निर्णयक्षमतामा पनि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । सिद्धान्ततः फरक राय व्यक्तिगत अंश थप्न वा प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नलेखिने भएकाले सहकर्मी न्यायाधीशसित मत बझाउन हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैले मिहिनेत गर्न नचाहेर होस् या सहकर्मीहरू चिढिएलान् भनेर, जुनसुकै कारणले न्यायाधीशहरू फड्के किनाराको साक्षी मात्रै बसेका भए पनि त्यसलाई पदीय कौशलअभावकै उपज मान्न सकिन्छ ।
पूर्ण वा बृहत् पूर्ण इजलास बनाउनुको अर्थ धेरै न्यायाधीशबीच एकमत जुटाउनु होइन, वैकल्पिक तर्काधार तथा सिद्धान्तहरूको आलोकमा मुद्दालाई हेरियोस् भन्ने हो । कथं बहुमतबाट एकतर्फी व्याख्या भैहालेछ भने पनि फरक रायले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गरोस् र त्यसका आधारमा समाज र सरोकारवालाबीच थप बहस सृजना होस् भन्ने हो । अब अपवादबाहेक कुनै पनि मुद्दामा फरक राय नै नलेखिएपछि विधिशास्त्रको अपेक्षित विकास कसरी हुन्छ ? स्वयम् सर्वोच्च न्यायमूर्तिहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो यो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:२७